ချစ်ရအောင်: ကြက်ဥပုံစံ နှင့် အသဲပုံစံ social widgets လေးပါ(ဘလော့ကာအတွက်)
ကြက်ဥပုံစံ နှင့် အသဲပုံစံ social widgets လေးပါ(ဘလော့ကာအတွက်)
Posted by Unknown Social Widget
ပြောပြမှာက အဟင်းအဟင်း ဆရာကြီးတော့ မဟုတ် ပါဘူးနော် ကြက်ဥလေးဗျာတော်တော်သဘောကြပါတယ်အပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာ
အောင်မြင်ရင်တော့ Comment လက်ဆောင်ထားခဲ့ပေါ့နော်
►2. Template ကိုသွားပါ
►3. ဖွင့်လိုက်ပါ.... ►4. CTRL+F ကိုနှိတ် ပါ အောက်က ဘားလေးတတ်လာမယ်
►5. </head>ထည့်ပြီးအန်းတားခေါက်ပါ</head> တွေ့ရင် အပေါ် ကနေ ထည့်လိုက် ပါ
►6. CTRL+F ခေါ်ထားတဲ့ ထဲမှာ </body> ထက်ရှာတွေ့ရင်
</body> အပေါ်ကနေ ထည့်ပြီး SAVE ပါ ok သွား ပါပြီး
<!-- Start Heart Bookmarking Gadget Code From http://www.blogtariff.com/ -->
<!-- End Heart Bookmarking Gadget Code From http://www.blogtariff.com/ -->
<!-- Start Heart Share Code From http://www.blogtariff.com/ -->
<!-- End Heart Share Code From http://www.blogtariff.com/ -->